ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूको कस्तो छ अवस्था ? - Laltin Media
Home»आर्थिक समाचार»ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूको कस्तो छ अवस्था ?
ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूको कस्तो छ अवस्था ?
By लाल्टिन डट कम June 19, 2022 No Comments1 Min Read
ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू समान हैसियतमा मर्जरमा जाँदै छन् । दुई बैंक १ बराबर १ को स्वापमा मर्जरमा जाँदै छन् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र मेगा बैंक नेपालको मर्जर सम्झौता भएसँगै त्यसको केही समय भित्र नै ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरमा जाने निर्णय गरेका हुन् ।
मर्जर पश्चात दुई बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब ४१ करोड हुने छ । हाल ग्लोबल आइएमईको चुका पुँजी २३ अर्ब ७९ करोड छ भने बैंक अफ काठमाण्डूको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ६२ करोड रहेको छ ।
त्यस्तै संचित मुनाफा सहित ग्लोबल आइएमईको जगेडामा ११ अर्ब ७६ करोड रहेको छ भने बैंक अफ काठमाण्डूको जगेडामा ६ अर्ब १० करोड संचित छ । मर्जर पश्चात बन्ने बैंकको जगेडामा १७ अर्ब ८७ करोड हुने छ। त्यस्तै मर्जर पश्चात दुई बैंकको पुँजीकोष ५२ अर्ब २९ करोड हुने छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म ग्लोबल आइएमई बैंकले २ खर्ब ६९ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ६० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ भने बैंक अफ काठमाण्डूले १ खर्ब ४ अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । मर्जर पश्चात बन्ने बैंकको निक्षेप संकलन ३ खर्ब ७३ अर्ब र कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ६३ अर्ब हुने छ ।